ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးထွက်ဖြစ်စေမယ့်အိပ်မက်ဆိုးသို့မဟုတ်သင့်အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့သူငယ်များ '' တောင်းဆိုနေတာသဘာဝနှင့်သူတို့ကိုလုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမအလယ်မြေပြင်ကိုများသောအားဖြင့်လည်းမရှိ. သို့သျောလညျး, သငျသညျကိုယျအဘို့ပိုလွယ်ကလေးများနှင့်အတူခရီးသွားလုပ်ဘို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. ထိုသို့ပြုမှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလူငယ်တွေကိုအမြဲလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်သို့မဟုတ်တွေ့မြင်သေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကိုသိမ်းပိုက်သူတို့ကိုစောင့်ကူညီရန်, ကျနော်တို့၏စာရင်းတစ်ခုပြုစုပြီးပြီ5ဥရောပတိုက်တွင်လေးတွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှု. သင်အလွယ်တကူကဤခရီးစဉ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားနဲ့. ကြည့်ကြပါစို့:
အမ်စတာဒမ် များသောအားဖြင့်တစ်မိသားစု-ဖော်ရွေအဖြစ်အကြံပြုသည်မဟုတ် ခရီးလမ်းဆုံး, သို့သော်သူကထိုလမ်းမဖွစျနိုငျဟုမဆိုလိုပါ. ကလေးတွေအဘို့, ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တည်နေရာဖြစ်ပါသည် Natura Artis Magistra သို့မဟုတ်အနုပညာရှင်တွေ. ဒါဟာငါးမွေးကန်များနှင့်ပြည့်စုံသောအကြီးအကျယ်တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့, ကစားကွင်း, သတ္တဗေဒပြတိုက်, နှင့် planetarium. ဒါဟာထက်ပိုတပ်ဆင်ထား 900 တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်!
တစ်နည်းအားဖြင့်, သငျသညျ Kaatsheuvel အတွက် Efteling ဦးနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာတိုင်းပြည်အတွက်အကြီးမားဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံဖြစ်ပါသည်, တစ်စိတ်ကူးယဉ်ဆောင်ပုဒ်နှင့်ဒဏ္ဍာရီနှင့်ဒဏ္ဍာရီအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူ. အများအပြားစီးနှင့်ဆုမွန်ကောင်းနေသောလေးတွေများအတွက်ဖျော်ဖြေရေးရှိပါတယ် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ.
ဘယ်အချိန်မှာကလေးတွေအဘို့အဖျော်ဖြေရေးမှကြွလာ, ဘယ်လ်ဂျီယံ ၎င်း၏ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံကမ်းလှမ်း, Plopsaland. ဒါဟာရောင်စုံင်, roller Coaster နှင့်ကစားကွင်းနှင့်ပြည့်ဝ၏, သည်သူငယ်ကိုခံစားရန်အဘို့အ themes များအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. ဒါဟာအစလေးတွေသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သောတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူလယ်ယာရှိပါတယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပြဇာတ်ရုံနဲ့ လှေစီး.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-attractions-kids-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ဆွဲဆောင်မှု #traveleurope europetrains europetravel eurotrip ရထား ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် travelbelgium travelengland travelfrance travelitaly travelnetherlands traveltips